Ukuvikelwa Kwedatha Nenqubomgomo Yobumfihlo AAAA ADVISER
inkampani yethu ISIVIVINYO SE-AAAA (https://immi.website) futhi abasebenzi bayo bazozama ukuvikela imininingwane yakho eyimfihlo nemininingwane yakho yangasese. Sikhombise ngezansi ukuthi siqoqa futhi sisebenzise kanjani idatha yakho.
1. Silusebenzisa kanjani ulwazi lwakho lomuntu siqu nedatha
ISIVIVINYO SE-AAAA iqoqa futhi isebenzise imininingwane yakho kanye nemininingwane yomuntu siqu ukuxazulula izinkinga zokuphatha nokwesekwa kwamakhasimende, ukusiza amakhasimende ethu. Sisebenzisa imininingwane nemininingwane yakho ukuze siqaphele ukulandela yonke imithetho nezinkontileka.
2. Ukusetshenziswa kolwazi lakho nedatha ngezinhloso zokumaketha
Uma ufuna yonke imininingwane yakho yangasese ukuthi isetshenziswe kamuva ngezinjongo zokuphromotha, sicela uxhumane nathi ku- info@vnz.bz futhi sizoqinisekisa ukuthi awutholi noma yikuphi ukunikezwa kokukhangisa noma ezinye izaziso ezivela kithi.
3. Ukuqoqwa kwemininingwane yomuntu siqu nedatha yomuntu siqu
Yonke imininingwane inkampani yethu ISIVIVINYO SE-AAAA ukuqoqa kuza kithi ngqo kusuka kuwe, njengamakhasimende ethu. Yonke imininingwane yakho ivikelwe ngokuthembekile futhi igcinwa enkampanini yethu ngaphandle kokusetshenziswa kwayo ngabantu besithathu. Sizogcina imininingwane yakho isikhathi esilinganayo sokuhlinzeka ngokusekelwa nokuphathwa kwezinsizakalo zethu.
4. Imininingwane Yakho Yakho Inkampani Eqoqayo
Lapho sithinta inkampani yethu ngokuxhumana nehhovisi, izingcingo, izindlela zokuxhumana nge-elekthronikhi, kanye nokuvakashela izinsiza zethu ze-Intanethi, siqoqa imininingwane mayelana nabasebenzisi namakhasimende ethu abeka ama-oda asebenzisa izindlela zokuxhumana ezingenhla nezindlela zokuxhumana.
Imininingwane esiyiqoqayo ingafaka imininingwane ngokuxhumana nokukhangisa, imininingwane ngamanethiwekhi, imininingwane mayelana nezinhlelo, ukuxhumana namadivayisi wokuxhumana, imininingwane ngabathumeli nabemukeli bemiyalezo ethunyelwe noma etholwe yinkampani yethu. Singakwazi ukuqoqa imininingwane mayelana nesikhathi nezindawo zokungena kumasevisi wethu noma izinsiza kusebenza. Siqoqa imininingwane mayelana nesikhathi otholakala ngaso, ukuhamba kokuchofoza kanye neminye imininingwane yesistimu.
Lolu lwazi lungakhombisa wena namaphoyinti wakho wokungena nezinye izinkampani.
Uma ukhathazekile ngemininingwane yakho, ungabhekabheka indawo yethu ngokungaziwa.
Ngokwesicelo sakho, singakunikeza ulwazi esilugcina ngawe, ngokuya ngobunikazi bakho. Imininingwane yakho ayitholakali kwabanye abasebenzisi, ngaphandle kwemibandela yokusetshenziswa komthetho kanye nezicelo ezisemthethweni zezindikimba ezisemthethweni ezinelungelo lokwenza kanjalo.
Siqoqa imininingwane mayelana nezivakashi eziya kuwebhusayithi yethu, siqoqa amakheli e-imeyili lapho sithinta inkampani yethu, inkampani yethu iqoqa izinombolo zocingo kanye nemininingwane yeselula lapho sithinta isikhungo sokuxhumana noma ngocingo kwisisebenzi.
Imininingwane inkampani yethu eyiqoqayo isetshenziselwa kuphela ukuhlaziya kwangaphakathi kanye nokwenza ngcono inkonzo yethu, izinsiza zethu ze-Intanethi nomsebenzi wethu jikelele.
Noma imuphi imininingwane yakho ayidluliselwa kwabanye abantu ngaphandle kwenqubo yokulethwa kuwe izimpahla, nomshuwalense wokulethwa, kuleli cala lonke ulwazi oludingekayo luzodluliselwa enkampanini ezothumela izimpahla ekhelini lakho nomshuwalense inkampani. Ngokufaka i-oda lokulethwa kwezimpahla kuwebhusayithi yethu noma ngocingo, uyavuma ukuhlinzekwa kwemininingwane yakho kumuntu wesithathu obhekele ukuletha lo mkhiqizo ekhelini lakho nomshuwalense walo.
Uma ungafuni ukuthola kithi eminye imiyalezo ngaphandle kwaleyo edingekayo njengengxenye ye-oda lakho kanye nokwenza kwayo, ungasibhalela ekhelini lethu: info@vnz.bz
5. Izindlela zokugcina nokuphila eshalofini lolwazi
Sigcina imininingwane yakho kusisekelo samakhasimende ethu. Lolu lwazi luzosetshenziswa yinkampani yethu futhi inani lesikhathi eligcinwe ligcinwe. Sidinga lolu lwazi ukuhlinzeka ngemibuzo futhi sixazulule izinkinga eziphathelene nezinsizakalo zethu kanye nezidingo zomthetho wokugcina idatha. Sinelungelo lokugcina lolu lwazi ngemuva kokuphothulwa kwenkonzo yethu nokuthengisa, noma ngabe ungasasebenzisi izinsiza zenkampani yethu. Yonke imininingwane izogcinelwa inani lesikhathi elifanelekile, ngaphandle kokuthi umthetho noma iziphathimandla zokulawula nemiyalo idinga ukuba sigcine isikhathi eside.
6. Amaqembu wesithathu
Sinelungelo lokudlulisa imininingwane yakho kolwesithathu oluhlobene nokwenza kwe-oda lakho. Ngaphandle kwemvume yakho eyengeziwe, sidlulisela imininingwane yakho ezinsizakalweni zokulethwa, izinkampani zomshuwalense ezihlobene nokulethwa kwezimpahla. Sinelungelo lokudlulisa ikheli lakho eliphelele, igama nesibongo, inombolo yocingo neminye imininingwane edingekayo ukuqeda le-oda. Sinikeza lonke ulwazi kuphela kulezi zinkampani ezisebenza ngokuhambisana nomthetho wokuvikelwa kwedatha nokugcinwa. Ngokwesicelo sakho, ungathola imininingwane kithi kithi futhi lapho imininingwane yakho ihlinzekwe.
Azikho uhlu lwamakhasimende ethu adluliselwa kwabanye abantu, ngaphandle kwezicelo ezivela kwiziphathimandla zombuso, uma zikhona.
7. Izaziso ze-imeyili, izincwadi, izindaba nokukhushulwa
Sinelungelo lokukuthumela izaziso, ukuhambelana, ukuxhumana nawe ngocingo noma ngewebhusayithi uma usufaka i-oda nganoma iyiphi yezindlela ezingaba khona. Bonke oxhumana nabo kungenzeka kuphela ngezindlela zokuxhumana ezinikezwe yithi. Sigodle ilungelo lokukukuthumelela imininingwane engatheni ngemikhiqizo yethu, izaphulelo kanye nokuphakanyiswa. Unelungelo lokwenqaba ukuthola lezi zaziso ngokulandela imiyalo noma ngokusibhalela ku-info@vnz.bz
8. Ukuqapha imeyili Ukuxhumana
Njengengxenye yokulawulwa kwezokuphepha, sinelungelo lokufunda noma imiphi imeyili ethunyelwe kubasebenzi bethu. Endabeni yokuqukethwe okungaphephile kwanoma iyiphi incwadi noma okunamathiselwe kuyo, njengegciwane, sinelungelo lokususa noma sibambezele.
9. Inqubomgomo yamakhukhi
Isayithi lethu lisebenzisa amakhukhi, okuyizingcezu ezincane zekhodi namafayela athuthukisa ukusebenza kwesayithi lethu kwikhompyutha yakho. Ngezansi sichaza ukuthi yiluphi ulwazi lapho siqoqa amakhukhi, silisebenzisa kanjani futhi siligcina nini.
Unelungelo lokukhansela ukulanda amakhukhi, kepha ngasikhathi sinye, asikwazi ukuqinisekisa ukusebenza okuhle kwesayithi lethu.
Ungafunda kabanzi ngamakhukhi ku-Wikipedia lapha.
Sincoma ukusebenzisa amakhukhi ekusebenzeni kahle nangokufanele kwesayithi lethu uma ungaqiniseki ukuthi uyawadinga noma cha. Ungakhubaza ukusetshenziswa kwamakhukhi uma uqiniseka ukuthi uyawadinga. Kufanele uqonde ukuthi wonke amakhukhi asetshenziselwa ukunikeza insizakalo ofuna ukuyisebenzisa.
Ungavimba isiphequluli sakho ekusebenziseni amakhukhi. Kufanele uqonde ukuthi ukusebenzisa lo msebenzi ukukhawulela ukusetshenziswa kwamakhukhi ngesiphequluli sakho kungashintsha ukusebenza kwawo wonke amasayithi owavakashelayo noma ohlose ukuwavakashela. Imvamisa, ukukhubaza amakhukhi kuzokhubaza izici ezithile namakhono esayithi, ngakho-ke sincoma ukuthi ungawavumeli amakhukhi.
I-imeyili yamakhukhi ahlobene
Isayithi lethu lingakhumbula umsebenzisi uma usuvele ubhalisiwe nathi, ukukukhombisa izaziso ezithile ezingasetshenziselwa abasebenzisi ababhalisile noma abangabhalisile. Sinikeza ngezinsizakalo zokubhalisela i-newsletter. Lapho sisebenzisa lo msebenzi, sisebenzisa amakhukhi akukhumbula.
Iphatha ama-oda amakhukhi ahlobene
Iwebhusayithi yethu ikhumbula i-oda lakho nekhukhi, imikhiqizo oyikhethile futhi iyakhunjulwa lapho usebenzisa iwebhusayithi yethu ukuqhubeka ukwenza ukucubungula kufaka phakathi ukukhansela noma ukuhlela i-oda lakho.
Amafomu amakhukhi Ahlobene
Uma ugcwalisa noma yiziphi izinhlobo kwiwebhusayithi yethu, amakhukhi angonga idatha yakho yomsebenzisi ukuze isetshenziswe ngokuzayo noma izincwadi.
Kwiwebhusayithi yethu kungenzeka ukusebenzisa amakhukhi anikezwe ngabantu besithathu abathembekile. Ngezansi sizochaza kabanzi ngokuthi yimaphi amakhukhi wesithathu ongase uhlangane nawo lapho usebenzisa isayithi lethu.
Sisebenzisa iGoogle Analytics, esidinga ukuhlaziya isayithi lethu. Amakhukhi angakwazi ukulandelela isikhathi esichithwe kusayithi lethu, amakhasi owavakashelayo, okuqukethwe okuthandayo, isikhathi uvakashela isiza sethu.
Ungafunda kabanzi ngemininingwane yekhukhi le-Google Analytics lapha.
Siyaphinda futhi, sikukhumbuza ukuthi ukuze isiza sisebenze kahle, sincoma ukuthi ushiye amakhukhi avuliwe.
Sithatha izinyathelo zokuphepha zokugcina idatha yakho ngokungathi sína futhi sithatha zonke izinyathelo ezifanele zokuqinisekisa ukuphepha kwazo. Ngokuya ngemininingwane, sisebenzisa imisebenzi yokuvikela iphasiwedi, ukubethela, ukulawula ukufinyeleleka, ukwenza isipele, amazinga okudlulisa nokulawula ubuqotho bemvelo ukuvikela idatha yakho ekulahlekelweni noma ekusetshenzisweni kabi.
QAPHELA: Asigcini imininingwane yakho yekhadi lesikweletu noma lasebhange. Imininingwane yekhadi lakho owake walikhokha ihlala ibethelwa hhayi igcinwe.
11. Imibuzo nezicelo
Uma unemibuzo eyengeziwe maqondana nenqubomgomo yobumfihlo, ukuvikelwa kwedatha noma ukusetshenziswa kwayo ezinhlelweni zethu, ungaxhumana nathi ngalolu lwazi: info@vnz.bz